Date My Pet » Five Nzira To Get Back Ex Your.
Five Nzira To Get Back Ex Your.
Saka iwe ndakavhiringidza? Akamubata nokuti makapiwa? Haana kuratidza kufarira zvakakwana mune zvavanoda uye zvinodiwa ukama hwako? Kurasika rudo hwako uye munoda iye shure? Zvinonzi kuenda kuva mugwagwa zvakaoma otangazve achivimba asi zviripo. Pashure pezvose kuti munhu anosangana rudo upenyu hwavo uye chaizvoizvo danana manzwiro avo haasi ose zuva. Ndandanda refu vanhu kuenda nokukurumidza-kudanana, nezvimwewo … zvakakwana kuratidza kuti chii iwe ndawana murume uyu hariwanikwi. Asi zvino munoziva zvose zvose takagadzirira uye vari kunzwa kutsutsa chaityisa izvozvi nokuti haugoni kuasimudza mumaoko enyu kana kutaura navo. Asi hakuna akarasika. Unogona kanenge edzai chakaomesesa kudzokera uye mukana ndechokuti kana paiva rudo rwakasimba ikoko ichiri ichava imomo kudivi ravo zvakare. All unofanira kuita ziya izvozvo sechinopiwa vari pamwe kuedza kukuita uye edza yako chakaomesesa kuvaratidza chaizvo dzinorevei kwauri. Pano dzinongova dzimwe nzira dzaunogona kuita kuti vakomana uye gals!
1. Tsanangura kuti nei vakavaitira Way makazviitira
Ari zvichida kuvhiringidzwa kuti nei iwe wakatora havakoshi kana vakavaitira zvakaipa. Izvi hazvirevi hazvo kuti unofanira kuita mamwe wemaoresa nyaya nei iwe wakaita. Zvinoreva kuva vakatendeseka. Zvingava kuti makanga muduku, iwe hauna kuziva chii iwe waiva kusvikira aenda kana zvikonzero. Hapana akakwana uye kana vanokuda zvechokwadi vanokuda uye nokuti vanovenga pamusoro iwewo zvose. Asi kutaurirana kazhinji chinhu chinodzivirira pakugarisana. Vanofanira kunzwisisa kuti nei akaita zvamaita. Iwe chikwereti navo kuti ivo vachaonga kutendeseka kwako uye chokwadi kuti makanga vakashinga uye akura zvokukwanisa kubvuma kuti makanga zvakaipa.
2. Stay In Contact Navo
Zviri pachena ichi yakaoma nokuti havazaifanira kuda kugara vachionana nemi. Uye unofanira kuremekedza kuti. Asi kungoti kana ukaona vanoti kwaziwai uye mashoko mashoma. Ratidza kuti hauna kukanganwa navo. Varatidze kuti iwe hanya uye kuti uchida kupedza nguva navo asi kuti imi unoremekedza kuti bhora iri mudare ravo zvino.
3. Vaudze kuti muri Sorry
Zvinoita sokuti pane nyore asi kazhinji chinhu chakanyanya kuoma munyika munhu kuita. Kune rimwe divi kune vanhu vanoti kure kazhinji. Unofanira kurova pakati nepakati pano. Inoda kuva pamwoyo uye. Unofanira kuratidza kuti zvechokwadi vanozvidemba kuti chii chawaita kwavari. For kuvakuvadza. Uye unofanira kuratidza kuti iwe kuzvidemba uye kuti zvinhu zvichava zvakasiyana kana vanotora iwe shure nguva ino. Haikwanise chete kuva mashoko asina maturo. Vachaona kuburikidza iwe pakarepo.
4. Ratidza kuti Makachinja
Izvi hazvirevi kuva munhu nokuti pachena paisazova musoro kuti. Zvakanga ndiwe somunhu wakamuita kuwira murudo newe pakutanga pashure zvose. Zvinoreva kuti iwe kuratidza kuti iwe zvakachinjwa izvi zvinhu kunaka kuti boka iwe vaviri kunze pakutanga. Unofanira kuratidza kuti unogona kuona kwamakaenda chakakanganisika zvino uye kuti chawakadzidza kubva.
5. Murwire naYe
Chimwe chezvinhu kudanana zvinhu zvaunogona kuita kurwira murume waunoda. Imi chete murwire munhu waunoda pashure zvose zvakasiyana kufanana kana chinoshamisira. Uye iwe anovarwira ivo uye kuvaratidza kuti vose kuti chinokosha kwauri iwe zvino kuratidza sei zvikuru munovada. Iva akatendeseka navo. Unonzwa kuita hombe chikamu hwako haapo uye kuti uri kutambura risingayereki. Kuva vakagadzirira kuisa pachako pamusoro mutsetse uye usarega kuzvikudza kwenyu kuwana munzira. Hapana anoda kusiyiwa kusurukirwa nokudada wavo corrector.